“Ballon d’Or kuma koobna ciyaartoyda Real Madrid” – Kylian Mbappé – Gool FM
“Ballon d’Or kuma koobna ciyaartoyda Real Madrid” – Kylian Mbappé
Dajiye May 23, 2022
(Paris) 23 Maajo 2022. Xiddiga kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé ayaa sheegay in abaal-marinta Ballon d’Or ee xiddiga adduunka ugu fiican aanu ahayn mid gaar u ah ciyaartoyda Real Madrid.
Real Madrid ayaa dooneysay in xiddiga reer France ee Kylian Mbappé ay kula saxiixato beeca xurta ah bisha June ee soo socota, kaddib marka uu dhammaado heshiiska uu kula joogo Paris Saint-Germain, hase yeeshee toddobaad ka hor ayuu gaadhay go’aanka ah inuu sii joogo kooxda reer France.
Heshiis saddex sannadood ah oo ka dhigaya ciyaartoyga ugu mushaharka badan kubadda cagta ayaa uu u saxeexay Paris Saint-Germain oo uu u ciyaari doonaa illaa laga gaadhayo sannadka 2025, markaas oo ay da’diisu noqon doonto 26 jir.
Haddaba Kylian Mbappé ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray wuxuu ku yiri:
“Waan la hadli doonaa Benzema oo aan u sharixi doonaa waxa dhacay.”
“Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo ciyaartoyda Real Madrid. Ku dhawaad ​​dhammaan ciyaartoyda Real Madrid waxay lahaayeen dabeecad isku mid ah.”
“In aad ku guulaysato Ballon d’Or taasi waxa ay noqon doontaa in aad tahay kan ugu fiican, iyada oo aan loo eegin kooxda aad u ciyaarto.”
RASMI: Goolhaye Manuel Neuer oo heshiiska u kordhiyey Kooxdiisa Bayern Munich… (Imise sano ayuu saxiixay?)